Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Benjamin Pavard Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full Story ee Genius kaas oo si fiican u yaqaan magaca; "New Thuram". Dabeecadeena Benjamin Pavard oo ah akhbaar xaqiiqo ah oo ku saabsan Jinsiga ah ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga soo bilaabo wakhtiga carruurnimadiisa ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof walba wuu ogyahay magaciisa Koobka Koobka Adduunka 2018 iyo farsamadiisa dhammaan boosaska daafaca. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah waxay tixgelinayaan Benjamin Pavard's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Benjamin Pavard Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
Benjamin Pavard oo ah geesiga daafaca France, wuxuu ku dhashay 28 March 1996 ee Maubeuge, Nord, France. Wuxuu ka soo kicitimay biloowgiisa oo uu ka helay waalidkiisa jilicsan ee sawirka hoos ku qoran.
Aabaheed uu bilaabay baqdinta, aabbaha Pavard ayaa aasaasay aasaaska mustaqbalkiisa hore ee wiilkiisa. Sida Benjamin Pavard uu dhigo;
'Saaxiibkeygii ugu fiicnaa ayaa maalin kasta iga qaadaa, taasina waa sababta aan ugu qoro jidhkayga. Ma jirin ciyaaro ama cayaaro markii aan yaraa, kubbada cagta. Waxaan si buuxda ugu mahadnaqayaa wax walba oo uu sameeyay. Aabahay markasta wuu igu riixay. Aniga la'aanteed, ma lahaan lahaa safarkan aan caadi ahayn ee aan imid. "
Benjamin Pavard Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Hadii aan shaki ku jirin, waa xiddig ka mid ah 2018 FIFA World Cup. Kabtanka Pavard iyo awoodiisa, iyo sidoo kale qaab nololeedkiisa oo ka soo jeeda garoonka dhexdiisa, dhisaan sawir buuxa oo isaga ah.
Sida waqtiga qorista, Rachel Legrain-Trapani sawir hoose waa saaxiibkii Benjamin Pavard.
Ka dib markii markii hore ay xirteen xiriirka ay wadaagaan, Legrain-Trapani iyo Pavard waxay u baxsadeen iyagoo la wadaagaya romantic bishii May 2018. Legrain- Trapani waa fanaani hore ee quruxda badan (Miss France, 2007).
Rachel Legrain-Trapani waxay qabatay indhaha caalamka oo ogaaday in ay ahayd saaxiibka Pavard ee saaxiibtinimo intii uu ku sugnaa Faransiiska 2018-4 oo ku guuleystay Koobkii Adduunka ee 3 ee Russia 16. Waxay u ekaatay si aan qarsoodi aheyn iyada oo ay ku faraxsan tahay in ay ka soo jeedo gadaasheeda.
Labadaba jecel ku raaxaystaan ​​xiriir adag oo lagu dhisay saaxiibtinimo. Rachel waa toddoba sano oo ka weyn ninkeeda iyada oo loo arko iyada oo aan qurxiyo muuqan.
Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa qurux ahaan qurux badan sida lagu muujiyay sawirka hoose. Legrain- Tayada dabiiciga ah ee Trapani waxay noqon kartaa sababteeda Miss Wes 2007 ku guulaysatay iyo sababta ay Benjamin Pavard u jeclaan jirtay iyada.
Benjamin Pavard Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -In badan oo ku saabsan gabadhiisa, Legrain-Trapani
Qurxinta quruxda badan, oo ah isboorti isboorti, ayaa la ogyahay in ay ku jirtay xiriiro isboorti oo aad u sareeya, oo leh waxyaabo loogu talagalay xiddigaha isboortiga. Laga soo bilaabo 2007-2009, Legrain-Trapani wuxuu soo koobay heer sare oo dareen ah Ladji Doucouré, oo ah tartan caalami ah.
2013 waxay guursadeen ciyaaryahankii hore ee FC Nantes Aurélien Capoue ee arooska lagu bandhigayo Abbey ee Saint-Florent-le-Vieil.
2016, labada nin waxay ku baaqeen wakhti guurkooda iyo quruxda 2007 Miss France oo mar kale dib u soo noqotay suuqa. Ka dib markii ugu horeysay ee xiriirkooda uu hoos u dhigo hoosta, Legrain-Trapani iyo Kabtanka ayaa u baxay dadweynaha iyagoo jacaylkooda ku jira May 2018.
Ku saabsan Rootyadeeda: Rachel Legrain-Trapani waa gabadha talyaaniga ah ee ku dhashay Saint-Saulve bishii August 31, 1988. Waalidiinta Rachel waa la furay markii ay wali yarayd. Hooyadeed, Silvana oo ah xoghaye ayaa Rachel gabi ahaanba soo kicisay. Waxay haysataa laba nusab oo kala ah Ruben iyo Melvin. Raadinta sawirka hoose, waxaad ku adkaan kartaa qofkii hooyada iyo gabadha.
Benjamin Pavard Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Dhismaha Xirfadaha
Sanadkii la soo dhaafay 2002, markii Pavard uu da'diisu ahayd 6, wuxuu jecelyahay inuu kubada cagta u arko isagoo qoraaya koox dhallinyaro ah oo degaanka ah, US Jeumont oo siisay marxaladdiisa si uu u muujiyo awoodiisa.
Marka da'da 10, waalidiintiisa waxay u tixgeliyeen inay wiilkooda u wareejinayaan akadeemiyada kubada cagta. Sababtoo ah waxay wali doonayaan in wiilkooda uu dhigto dugsi ku-meel-gaadh ah da'daas, labada waalidba waxay bilaabeen inay raadsadaan dugsi kaas oo u ogolaan lahaa Pavard inuu ciyaaro kubada cagta. Iskuul ku yaala agagaarka akadeemiga Lille wuxuu ahaa waalidiintiisa doorasho doorasho ah. Pavard waa inuu ka qayb galaa tijaabo ka socota akadeemiyadda Lille oo uu ku soo maray. Sida reer Benyaamiin hanti ahaan u siiya;
Waxaan gurigeygii hore ka baxay. Waalidiintey ayaa safar dhowr kilomitir u socdeen si ay u arkaan. Marnaba ma awoodi doono inaan uga mahadceliyo waxa ay igu sameeyeen.
Intii lagu jiray Lille, Benjamin Pavard oo ahaa hamiyadii sii socotay ayaa ahaa mid aan haboonayn. Kadibna, wuxuu heystey xoog leh Go'aanka uu sameeyay riyadiisa waayeelka waayeelka ah ka dib markii uu sanadka 10 ku qaatay akadeemiyadda.
Benjamin Pavard Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Soo-koobidda Xirfadaha
Ka dib markii uu ku soo laabtay waqtigii 25 ee Lille laba xilli ciyaareed, Pavard ayaa bilaabay inuu dareemo kalsooni la'aan kooxda sababtoo ah la'aanta kubada cagta. Pavard ayaa ka tagay kooxda si uu ugu biiro Stuttgart oo ku biiray 2016. Jarmalka, Pavard wuxuu dareemay in ka badan guriga. Waxa uu si aad ah ugu farxay hooyadii iyo aabihiis (sawirka hoose) markii uu kooxda Stuttgart ku hogaamiyay inay ku guuleystaan ​​horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkan 2016 / 17.
Ninka Faransiiska ah ayaa ku riyaaqay nolosha Jarmalka halkaas oo uu helay kalsoonidii uu ka maqnaa Lille. In uu erayadiisa;
"Wax walba waa ku habboon yihiin. Magaaladu waxay bixisaa wax badan, garoonkuna marwalba wuu buuxsamay, waxaan dareemi karaa kalsoonida tababaraha, asxaabteyda iyo guddiga, "
Benjamin Pavard Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Kacsanaanta Fikradda
Ka hor inta uusan Koobka adduunka ee 2018 ee Koobka Adduunka ee Russia, awoodda uu u leeyahay inuu ka ciyaaro VfB Stuttgart ayaa si toos ah ugu tiirsan awoodiisa kubadeed ee kubada. Markii Pavard loogu yeeray xulka qaranka qaranka Faransiiska markii ugu horeysay ee 2017, wuxuu lahaa fasax qado ka dib fasal Jarmal ah mana uusan dareemin in uu ka maqnaa wicitaano dhowr ah oo ka yimid waalidkiis.
Daafaca Faransiiska ayaa ugu yeeray waalidkiis inuu dib u ceshado, isagoo ooyaya ilmo farxad leh markii ay fariin farxad leh u direen. Ma qaadan waqti dheer ka hor inta uusan gurigiisii ​​ku laaban si ay ugu wadaagaan farxada hooyada iyo aabaha.
Dhammaan wixii allabaryo ah ee uu sameeyey tan iyo markii uu ahaa wiil ayaa ugu dambeyntii lacag ka bixiyay Russia 2018 FIFA World Cup. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Benjamin Pavard Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadida -Xaqiiqooyinka Qofka
Benjamin Pavard waa ilmo kaliya ee waalidkiis. Wuxuu leeyahay walaalo ama walaashiis. Aragtida dhow ee qoyskiisa ayaa muujinaysa muuqaal fiican oo udhaxeeya Pavard iyo hooyadiis.
Pavard waxaa loo yaqaanaa timaha ciriiriga ah iyo muuqaalka kubada cagta. Wuxuu ahaa naane "Jeff Tuche"Ayuu raaciyay saaxiibadiisa Faransiiska ka dib markii aabbihii caajis leh ee filimka majaajilada Faransiiska"Les Tuches. "
Benjamin Pavard ayaa si aad ah u qiyaastay xirfaddiisii ​​uu ku lahaa qaabka uu ufududeeyaha, oo ahaa xiddigii hore ee Faransiiska Lilian Thuram. Benjamin Pavard inta badan waqtigiisa waxbuu ka bartaa lataliyaha
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Benjamin Pavard Storyhood iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Samir Nasri Storyhood Plus Xogta Warka Xaddidan